नयाँ दैनिक | बिचार/ब्लग बिचार/ब्लग – Page3– नयाँ दैनिक
प्रोक्सी वारको रणभूमिमा भेनेजुएला
ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा धनी मुलुक भेनेजुुएलामा आर्थिक, राजनीतिक संकट चुलिदैं गइरहेको छ । विश्वको सवैभन्दा ठूलो तेल भण्डार, ग्याँस, सुन, हिराजस्ता बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भेनेजुएलाको राजनीतिक भविष्यका बारेमा विश्वभरि विविध कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।
खासगरी ह्युगो चाभेज सत्तामा आएपछि भेनेजुएलामा समाजवादी आर्थिक कार्यक्र...
यस्तो तरिकाले समृद्धि आउँछ ?
ऋषि विश्वामित्रले युधिष्ठिरलाई खराब मानिस र दुर्योधनलाई सज्जन मानिस खोजेर ल्याउन भने। लामो समयको खोजीपछि दुवैजना रित्तै फर्किए । युधिष्ठिर सत्यवादी र सज्जन भएकाले खराब मानिस नै देखेनन् भने दुर्योधन आफू खराब भएकाले सज्जन मानिस भेट्न सकेनन् ।
राज्यको नेतृत्वमा के अब युधिष्ठिर सकिएर दुर्योधनले रजाईँ गरेका हुन् त ? नत्र राज्यले इमान्दार...
नेविसंघको आन्दोलन : स्ववियु चुनाव भाँड्ने प्रपञ्च
केन्द्रमा नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ । सातवटै प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेस कतै पनि छैन । झण्डाबाल गाडीभित्र जता हेरे पनि वामपन्थी नेताहरु नै देखिन्छन् । देशका अधिकांश स्थानीय तहमा पनि वाम वर्चस्व नै छ । यो सब परिदृष्य देख्दा यतिबेला काङ्ग्रेसजनहरु साँच्चिकै छट्पटाएका छन् ।
वाम जनमत विभाजनको जगमा सधैंभरि सत्ता हत्याइरहने काङ्ग्रेसको कागता...
तेलको भण्डार ‘भेनेजुयला’ बारेका भ्रम
भेनेजुएलाको वर्तमान संकटबारे विश्वमा र हाम्रै देश नेपालमा पनि तीन धारणाहरु रहेका देखिन्छन् । पहिलो भेनेजुएला सरकारका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको समर्थन दोस्रो मदुरोको विरोध र तेस्रो तटस्थ । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोले जनवरी १०, २०१९ मा त्यहाँको सर्वोच्च न्यालयका सभापति माइकेल मोरेनोद्वारा ९० राष्ट्रहरुका प्रति...
शिक्षाको सरोकार र शिक्षामा सरकार
शिक्षा मानव जीवनको एक निरन्तर प्रक्रिया हो अर्थात जन्मदेखि मृत्युसम्म यो वा त्यो रुप र पद्धतिमा निरन्तर चलिरहन्छ । शिक्षा प्रकृतिले, परिवारले, समाज, धर्म, संस्कार, वातावरण र समयले दिइरहन्छन् र बच्चा सिकिरहन्छ । यी सिकाइहरु सरल, सहज र स्वभाविक हुन्छन् र रुपमा अनौपचारिक हुन्छन् । अनि बच्चा अलि जटिल सिकाइमा जान्छ जब उ विद्यालयमा औपचारिक शिक्षामा...
अध्ययन गर्ने शैली सुधारौँ
हामी कम्युनिस्टहरु मानव जातिलाई पूर्ण मानव बनाउने साम्यवाद सम्मको अतिलम्बे यात्राका यात्रीहरु हौं । मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबैखाले शोषण, दमन र विभेदबाट मुक्ति चहान्छौं । मुक्तिका अभियान्ताले मुक्तिको सिद्धान्तको अध्ययन जरुरी हुन्छ ।
जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको हाम्रो यात्रा सुविचारित, योजनावद्ध र नियमबद्ध हुन्छ । विज्ञानले आ...
स्विस बैंकसँगको साइनो-पम्फादेखि मिनुसम्म
संसार परिवर्तनशील छ र यो परिवर्तनशील संसारमा हर चिज परिवर्तनशील छन् । भौतिक मात्र नभएर अभौतिक, वैचारिक, नैतिक मूल्य र मान्यता पनि परिवर्तनशील छन् । हिजोका मूल्य र मान्यता आज उही अवस्थामा खोज्नु परिवर्तनलाइ आत्मसाथ गर्न नसक्नु हुन सक्छ ।
मलाइ संझना छ, स्कुल पढ्दा अर्थशास्त्रका गुरुले भन्नुभएको थियो, ‘नेपाल गरिब जनता बसोबास गर्ने धनी दे...
दर्जन प्रश्नका दर्जन उत्तर
१. दर्शन के हो ?
अंग्रेजी (philosophy) शब्द philo को अर्थ प्रेम र sophia को अर्थ विवेक जस्ता शब्दको मिलनबाट विवेक प्रेम वा विद्यानुराग हुन्छ । ज्ञान प्रतिको प्रेमलाई दर्शनशास्त्र भनिन्छ । अर्को शब्दमा दर्शन भनेको विश्वलाई हेर्ने साधारण (आम) तरीका हो ।
२. दर्शन शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता को हुन् ...
कायरसँग ‘क्रान्तिकारी बिहे’ र नाम खुइल्याउने धुन
रामको नाम खुइल्याएर रावणले आफ्नै नाम चम्काउन खोजेका थिए, सकेनन् । यसैले शक्तिका पूजारी हामी रामराम जप्दै सुत्छौँ र उठ्छौँ । एकताका भैरव अर्याल नाम फेर्ने धुनमा कस्सिएर लागेका थिए । ‘काउकुति’ मा त्यही पढन पाइन्छ । मान्छेहरू नाम चम्काउन नाम फेर्ने पनि गर्छन् ।
नेपालमा नाम फेर्ने काममा डा. तुलसी गिरी विशेष चर्चित छन् । क्रिश्चियन धर्म ग्...
२८ घण्टाको लडाइँमा बेइजिङ कब्जा …
चीनमा जापानी साम्राज्यवादी अत्याचारले सीमा नाघेको बेला ‘राष्ट्रवादी’ च्याङ काई सेक भने जापानी आक्रमणप्रति मुकदर्शक भएर कम्युनिष्टहरू सिध्याउने अभियानमा लागिरहेका थिए । ठिक यसैबेला सन् १९३६ अगस्त १ मा चिनियाँ लालसेनाले एक श्वेतपत्रमार्फत् जापानी आक्रमणकारी विरुद्ध विद्रोह गर्न र राष्ट्रिय मुक्तिका लागि एक हुन चिनियाँ देशभक्त जनताका नाममा अपील ...
‘दुःखी नेपाली, कङ्गाल नेपाल’
माघ १, काठमाडौँ । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले सार्वजनिक अपिल मार्फत सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ । उसले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा लगाउँदै सरकारले ‘दुःखी नेपाली, कङ्गाल नेपाल’ बनाएको आरोप समेत लगाएको छ । नेकपाका नेता खेम थपलियाले पार्टीको अपिललाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘हामी सानो देश होइनौँ, संसारको ९६ औं स्थानमा छौँ’
भूराजनीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा आफ्नो विश्वदृष्टिकोण के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रष्ट भएन भने हामीले बनाएको आन्तरिक नीति फगत कल्पना मात्रै हुन्छ । आन्तरिक नीति संसारमा भएका दुई सयवटै देशबाट कतै न कतै प्रभावित भइरहेको हुन्छ । सामान्तयः के भनिन्छ भने वाह्य नीति भनेको आन्तरिक नीतिकै विस्तृत रुप हुन्छ ...